बाजेले सोध्नुभो, ‘राजा सन्चै छन् ?’- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
इन्द्रजात्राकै दिन काठमाडौं उपत्यकालाई गोर्खाली सेनाले कब्जा गरेको इतिहास छ । भनिन्छ, कुनै जनधन क्षति नभई बडो सहजताका साथ हात पारेका थिए, उनीहरूले काठमाडौं उपत्यका । र, त्यत्तिकै सहजताका साथ स्विकारेका थिए रैथाने जनताले पृथ्वीनारायण शाहलाई ।अचम्म ! कहीँ कतै हताहत हुन पाएन । फेरि कहिल्यै कुनै विद्रोह उठेन ।
मंसिर ६, २०७७ भूपाल राई
२०७७ भदौ १८ गते । काठमाडौंमा ‘यें याः’ (इन्द्र जात्रा) स्थगित भइसकेको थियो । ललितपुर, पुल्चोकमा एउटा गजबको परिदृश्य देखियो । कोभिड महामारीका कारण जिल्ला प्रशासनले रथ यात्रामा रोक लगाएको थियो । तर, स्थानीय जनता प्रशासनको त्यो रोक्का आदेश तोडेर स्वतःस्फूर्त रूपले भेला हुन पुगे । कोरोना संक्रमणको पर्वाह नगरी सम्बन्धित आस्थाको मानव सागर उल्टियो । रथ नतानी नछाड्ने आस्थावान जनता र प्रशासनबीच निकै ठूलो झडप भयो । केही प्रहरी जवानहरू घाइते भए ।
त्योभन्दा अगाडि । ललितपुरकै खोकनामा त्यस्तै प्रकृतिको अर्को घटना भएको थियो । काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याकको विकासे परियोजनाका कारण खोकनाका फाँटहरूमा सरकारले रोपाइँ गर्न रोकिरहेको थियो । कृषकहरूले सरकारको आदेशलाई अवज्ञा गर्दै झडपकै बीचमा रोपाइँ गरे ।
अझ त्योभन्दा अगाडि । गुठीको बारेमा ल्याउन लागेको सरकारी नयाँ विधेयकको विरुद्धमा उठेको जनलहर झन् हेर्नलायकको थियो । काठमाडौं माइतीघर मण्डला परिसरमा उत्रिएको नेवाः समुदायको विशाल जनसागरले सरकारको एकतर्फी निर्णयलाई एकै दिनमा उल्ट्याइदिएको थियो ।
यी घटनाहरूको शृंखलाबद्ध परिदृश्य हेरिरहेको मैले एक साक्षीको रूपमा भदौ १८ गते फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखेँ– ‘उपत्यकाका नेवार समुदाय साँच्चि नै सलामका हकदार छन् । उनीहरू एक दिन मात्र जागिदिए भने सबै खाले शक्ति घुँडा टेक्न बाध्य हुन्छन् । तर, दुःखको कुरा, उनीहरू नितान्त सांस्कृतिक प्राणी छन् । त्यसैले उनीहरूले पटक–पटक सांस्कृतिक दुःख झेलेका छन् । उनीहरूले अब बुझ्नुपर्छ, यो दुःखको एक मात्र निदान घोर सांस्कृतिक प्राणी भैरहनुमा होइन बरु आफूलाई राजनीतीकरण गर्नुमा छ ।’
आक्षेप वा अतिशयोक्ति होइन तर आम मानिसको बुझाइ पनि यही छ— काठमाडौं उपत्यकाका नेवाः समुदायको शक्ति समसामयिक राजनीतिक मुद्दामा यथेष्ट रूपले खपत हुन सकिरहेको छैन । माथि उल्लिखित घटनाको अनुपातमा यदि त्यो शक्ति उठिदिने हो भने एक रातमा धेरै कुरा उलटफेर हुन सक्छ । सांस्कृतिक मुद्दामा देखिएको उनीहरूको पटक–पटकको शक्ति प्रदर्शन राजनीतिक आन्दोलनमा समेत खर्चिने हो भने कुनै पनि जनविरोधी राज्यसत्ताले एक पलकमा घुँडा टेक्नुपर्छ । त्यो निर्णायक हैसियतको शक्ति छ नेवाः समुदायसँग । त्यसका लागि आवश्यक सबै आधारभूत सुविधा पनि उनीहरूलाई प्राप्त छ । त्यसैले नेवाः समुदाय सलामका हकदार छन् । तर, अपेक्षाकृत त्यसो हुन सकिरहेजस्तो लाग्दैन ।
२००७ सालदेखि यताका आंशिक परिघटना मात्रै हेर्ने हो भने पनि कता–कता केही अपुग वा उदासीन नै प्रकट भइरहेझैँ लाग्छ । जस्तो कि गणतन्त्रको युगीन आन्दोलनमा जस्तै संघीयताको अपार जनआकांक्षा र अझ खासगरी प्रदेशको पहिचानजनित नामांकनको अभियानमा उनीहरूले अगुवाइ नै गर्न सक्थे, तर त्यसले उनीहरूलाई गहिरो गरी छोएको देखिएन । यही उदासीनता या राजनीतिक निरपेक्ष भावको फाइदा उठाएर एकात्मक नस्लवादी राज्यले उनीहरूलाई ‘वाग्मती’ नामको पहिचानद्वेषी प्रदेशको नाम उपहारमा दियो । उनीहरूले कडा विरोध गर्नुको सट्टा सहजै स्वीकार गरे । त्यो विराट समुदाय सांस्कृतिक अधिकारको मुद्दामा जति अगाडि छ, त्यसको तुलनामा राजनीतिक मुद्दामा कमी भएको महसुस हुन्छ । अंश–अंशमा लडिरहनुपर्ने सांस्कृतिक मुद्दाहरू राज्य सत्तामाथिको निर्णायक पहुँचले एकैचोटि प्राप्त हुन सक्छ भन्ने कुरा उनीहरूले नबुझेको पनि होइन होला । तर, यस्तो किन भइरहेको छैन ? व्यक्तिगत स्तरमा त्यत्रो राजनीतिक सहभागिता र नेतृत्व जन्माउने काठमाडौं उपत्यकाले समुदायलाई राजनीतीकरण गर्न भने किन सकेन ? एउटा कौतुकमय प्रश्न खडा हुन्छ ।
इन्द्रजात्राकै दिन काठमाडौं उपत्यकालाई गोर्खाली सेनाले कब्जा गरेको इतिहास छ । त्यसैले एक ऐतिहासिक संयोग पनि हुन पुगेको छ यो दिन काठमाडौंका लागि । उपत्यकाका मानिसहरू जात्रामा रमाइरहेका बेला या भोज खाइरहेका मौका छोपी बडो चलाखीपूर्वक हमला गरेका थिए गोर्खाली शासकहरूले । भनिन्छ, कुनै जनधन क्षति नभई बडो सहजताका साथ हात पारेका थिए, उनीहरूले काठमाडौं उपत्यका । र, त्यत्तिकै सहजताका साथ स्विकारेका थिए यहाँका रैथाने जनताले गोर्खाली शासनलाई । स्विकारेका थिए– नयाँ राजाको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई ।
अचम्म ! कहीँ कतै हताहत हुन पाएन । फेरि कहिल्यै कुनै विद्रोह उठेन । मानौँ त्यो घटना यस्तो थियो, जो पूर्वनियोजित रूपले सबैको इच्छाअनुरूप भएको थियो । यस्तो कसरी भयो होला ? के यहाँका रैथाने मानिसहरूका लागि राजतन्त्र एउटा अपरिहार्य सांस्कृतिक अंश थियो ? अथवा लगभग दुई हजार वर्षअगाडिदेखिको अविच्छिन्न अभ्यासले निर्माण गरेको चेतना ? के यही सांस्कृतिक अन्तर्चेतना र अविच्छिन्न राजतन्त्रतात्मक अभ्यासको कारणले उपत्यकावासीहरूले एक नयाँ राजालाई पनि सहज रूपले स्विकारेका थिए ? के यही ऐतिहासिककै कारणले उनीहरूमा गणतन्त्रको चेत गौण देखिएको हो ?
‘राजा’ को सांस्कृतिक स्वीकारोक्तिबारे यति कुरा कोट्याइसकेपछि बल्ल अब म बाजेको स्मृतिविम्बतिर लाग्नु उचित सम्झिन्छु ।
मेरा बाजे ९४ वर्षको उमेरमा २०४८ सालमा बित्नुभयो, जो आफैँ एक शताब्दी लामो इतिहास हुनुहुन्थ्यो । स्मृतिबिम्बमा उहाँका जीवनका अरू पनि अनेक आयाम खिच्न सकिन्छ । तर, यहाँ म ती कुराहरू मात्र राख्ने कोसिस गर्छु, जो यस बयानबाजीका लागि सान्दर्भिक छन् ।
पृथ्वीनारायण शाहले किरात भूमि (माझ किरात) कब्जा गरेको लगभग १२४/२५ वर्षपछि बाजेको जन्म भएको थियो । औसतमा हिसाब गर्दा त्यसको छैटौं या सातौं पुस्तापछि जन्मिनुभएका मेरा बाजेले तर कहिल्यै त्यो हिसाबको फेहरिस्त हामीलाई सुनाउनुभएन । कहिल्यै त्यो दुर्दान्त घटनाको हिसाब–किताबले उहाँ पिरोलिनुभएको पनि हामीलाई थाहा भएन । उहाँको छैटौं वा सातौं पुस्ताअगाडिको पुर्खाले इतिहासको त्यो निर्मम क्षणसँग कसरी लड्यो ? वा लडेन ? कहिल्यै बताउनुभएन । के उहाँलाई त्यो कुराको ज्ञान थिएन ? अथवा सय, सवा सय वर्ष लामो समयको डंगुरभित्र उहाँभित्रको त्यो संज्ञान पुरिइसकेको थियो ?
तर, मलाई लाग्छ— मेरा बाजेमा त्यो इतिहासको बोध भरपूर मात्रामा थियो । मात्र उहाँलाई लाग्थ्यो होला इतिहासले दिएको करार चोट बाँडेर आफ्ना भावी पुस्तालाई घाइते किन बनाउनु ? दुनियाँका सबै बाजेहरू सायद यस्तै हुन्छन् । पुराना यन्त्रणाहरू सबै बिर्सेर होइन बरु स्मृतिको बन्द खोपीभित्र जागा राखेर आफ्ना भावी सन्तानको सुखद समयको उत्खननमा अहोरात्र जुटिरहन्छन् । भावी समयसँगै बाँच्ने कलाको परख गरिरहन्छन् ।
यही कारण हुन सक्छ, बाजेले हामीलाई कहिल्यै कुनै राजा, महाराजाको इतिहास सुनाउनुभएन । राजा वा राजतन्त्र सम्भवतः उहाँको सांस्कृतिक चेतभित्रको विषय नै थिएन । यसको सट्टा बरु उहाँ अक्सर आफ्नै पुर्खाहरूको गौरवगाथा कोट्याउने गर्नुहुन्थ्यो । यसले सायद उहाँलाई आवश्यकताभन्दा बढी कठोर बन्न सघाएको थियो । हामीलाई सानोमा लाग्थ्यो, उहाँ आफैँ (यतिखेर हामीले वर्णन गर्ने गरेको) एक पृथ्वीनारायण शाह हुनुहुन्थ्यो । यस्तो हुनु सायद उहाँको वंशजवृत्तिका लागि आवश्यक पनि थियो । किनभने समय त्यस्तो कठोर थियो, जसले पुर्खाहरूमा धेरथोर निर्ममताको माग गर्थ्यो ।
हामी केटाकेटीका लागि बाजे हाम्रो घरको सबभन्दा खतरनाक दुश्मन हुनुहुन्थ्यो । किनभने बाजे हाम्रोअगाडि साह्रै कठोर मिजासमा प्रस्तुत हुने गर्नुहुन्थ्यो । सानोभन्दा सानो गल्तीमा पनि हामी उहाँले टेकिरहेको लठ्ठीको मारमा पर्नुपर्थ्यो । बाजेले हँसिलो मुहार पारेर बोलाएको वा खुसी भएर आफ्नो छेउमा राखेको हामीलाई कहिल्यै थाहा भएन । हामी सधैँ बाजेबिनाको घर–आँगनको कल्पना गर्थ्यौं । तर, जब उहाँ हाम्रोसामु उभिनुहुन्थ्यो हाम्रो सातोपुत्लो उड्थ्यो । आफ्नै नाति नातिनीहरूका लागि उहाँ किन पृथ्वीनारायण बन्नुहुन्थ्यो ? त्यस्तो खतरनाक रोव–रवाफमा उहाँले किन प्रकट हुनुपर्थ्यो ? त्यो हामीले कहिल्यै बुझेनौं । हामी मसिना भुराभुरीहरू आँगनमा हल्ला गर्दै खेल्थ्यौँ । तर, बाजेलाई किन हो त्यो हमेसा अप्रिय लाग्थ्यो । उहाँ माथिल्लो घरको पर्खालमाथि चढेर हामीलाई गुलेलीले हान्नुहुन्थ्यो । हामी कत्तिपटक मट्याङ्ग्राले लागेर बिरामीसमेत पर्थ्यौं (यो प्रसंग मैले अन्त कतै पनि उल्लेख गरिसकेको छु) । हामीलाई हान्दाहान्दा मट्याङ्ग्रा सकिएपछि उहाँ फेरि हामीलाई नै माटो बोक्न लगाउनुहुन्थ्यो । मट्याङ्ग्रा बाट्न लगाउनुहुन्थ्यो । हामी यो थाहा पाउँदापाउँदै पनि आफ्नो कलिलो हातले बाजेका लागि मट्याङ्ग्रा बाटिदिन्थ्यौं, जसको प्रहार भोलि आफैँमाथि आइलाग्ने निश्चित थियो ।
हाम्रो गाउँको देब्रे पाटोमा ठूलो क्षत्री गाउँ थियो । दाहिनेतिर थियो कामी गाउँ । क्षत्रीहरू प्रायःले बाजेलाई आदरसाथ निधार झुकाएर दर्शन गर्ने गर्थे । कतिलाई एक बोतल रक्सीमा उहाँले जग्गा राजीनामा दिनुभएको थियो । कसैले अदबका साथ उहाँको अगाडि निधार थापेन भने निश्चित थियो, उसले बाजेको हातमा हल्लिरहेको डन्डाको भागीदार बन्नुपर्थ्यो । उहाँ हिँडिरहेको बाटोमा अचानक गाउँको कुनै दलित भेटिए तुरुन्त उसले बाटोको छेउ लागेर उभिनुपर्थ्यो । तर, बाजेले दलितहरूको निधारमा भने कहिल्यै आफ्नो हात थाप्नुभएन । किनभने उनीहरू बाजेका नजरमा अछुत जो थिए । सानो छँदाको एउटा अर्धविस्मृत घटना सम्झिन्छु । एक दिन हाम्रो घरमा एक हूल मान्छेहरू आए, घोडा चढेर । तिनीहरू हाम्रा बाबालाई भेट्न आएका थिए । तर, बाबा घरमा हुनुहुन्नथ्यो । बाजे हाम्रो पाली–घरको सिकुवामा हुक्का तान्दै खाटमाथि बसिरहनुभएको थियो । बाबा नभएपछि तिनीहरूले बाजेसँगै सामान्य चिनजानको कुरा अघि बढाइरहेका थिए । एक छिनको सामान्य भलाकुसारीपछि एक्कासि बाजेले भनेको सुनियो, ‘उहिले त भेनाजु (मलाई जहाँसम्म लाग्छ, बाजेले यही साइनोको दाबी गर्नुभएको थियो) भनेर ढोग्थ्यौ । तर, अहिले त मन्त्री भयौ, के चिन्थ्यौ होला र... !’
बाजेको कुराबाट थाहा हुन गयो तिनीहरूमध्ये एक जना हाम्रै जिल्लावासी, कुनै बहालवाला मन्त्री थियो, जो सम्भवतः तत्कालीन राजाको विश्वासपात्र थियो र जो हाम्रा बाबाको चिनारु थियो । पञ्चायतकालमा यस्तै हुन्थ्यो मन्त्री, अञ्चलाधीश या बडाहाकिम यस्तै के–के हुनका लागि राजाको कृपापात्र हुनैपर्थ्यो । बाजेको त्यस्तो दाबीसहितको चेतावनी आएपछि तत्कालै त्यो मन्त्रीले उहाँको हातमा निधार थमाइदियो । त्यसपछि मात्रै बाजेले खुसी भएर उनीहरूलाई बस्ने अनुमति दिनुभएको थियो । बाजेका जीवित दुई छोराहरू (हाम्रा बाबासहित) प्रति झन् उहाँ किन हो असाध्यै असहिष्णु हुनुहुन्थ्यो, कहिल्यै आफ्ना छोराहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न नचाहने । केही आवश्यक काम परे उहाँ बोजुमार्फत सूचना प्रवाह गर्नुहुन्थ्यो । बाजेलाई लाग्थ्यो, ती दुई छोराहरू उहाँले आर्जेका जग्गाजमिन बेच्दै जाँड, रक्सी र राजनीतिमा स्वाहा पार्ने बदमासहरू हुन् । त्यही भएर होला हाम्रा बाबा कहिल्यै पनि बाजेको सम्मुखमा पर्नुहुन्नथ्यो । आमा भन्नुहुन्थ्यो, तिमेरका बाउ र काकाले बेचेर पनि कहिल्यै सकिएनन् बाजेका जेथाहरू ।
यस्तो थियो हाम्रा दुश्मन बाजेको स्मृतिचित्र जतिखेर उहाँ सक्रिय उमेरमा हुनुहुन्थ्यो । र, जसले सायद कुनै इतिहासको पृथ्वीनारायणलाई बिर्साउँथ्यो । अथवा सम्झाउँथ्यो । तर, बाजेको त्यो कठोरता, त्यो निर्ममता, उहाँमा प्रकट हुने त्यो निरंकुशतामा के कुनै पृथ्वीनारायण भन्ने राजाको प्रभाव थियो ? मलाई लाग्छ, त्यस्तो कदापि थिएन । यो कुनै व्यक्तिविशेषद्वारा प्रदत्त अवदान थिएन । यो त लामो समय र कालखण्डको दौरान मानव इतिहासले निर्माण गरेको एक यस्तो परिच्छेद थियो, जो स्वाभाविक रूपले बाजेको हातमा हस्तान्तरण हुनपुगेको थियो ।
वर्ण व्यवस्थाले उमारेको छुवाछूतको विभेदकारी उकुच किरात भूमिमा ठ्याक्कै कहिलेदेखि पल्टिन पुग्यो ? जो पहिले कहिल्यै थिएन (खोजकै विषय छ) । तर, मेरा बाजेले पनि यसको नकारात्मकतासहितको कालो कर्तुतलाई आफ्नो जीवनमा अवश्य प्रयोग गर्नुभयो । छुत–अछुतजस्तो कलंकको दुष्प्रभाव बाजेमा पनि त्यति नै पर्न गयो, जति अरूमा परेको थियो । र, मलाई लाग्छ— यो मेरा बाजेको जीवनमा कथित नेपाल एकीकरणले सार्न पुगेको पहिलो संक्रामक रोग थियो, जसबाट उहाँ पनि ग्रसित हुनुहुन्थ्यो । तर, यसको अर्थ यो कदापि होइन कि एकीकरणको कथित भाष्यले जन्माएको कुनै चक्रवर्ती राजाले मेरा बाजेको दिमागमा शासन पनि गरेको थियो । वास्तवमा त्योबाट बाजे बिल्कुल सुरक्षित हुनुहुन्थ्यो ।
खासमा भन्ने हो भने कुनै ‘राजा’ वा राजासहितको कुनै राज्यसत्ता बाजेको पुर्ख्यौली अभ्यास र चिन्तनभन्दा बिल्कुल फरक कुरा थियो । छुवाछूतको पहिलो संक्रमणबाहेक एक अर्को अतिरिक्त कुरा पनि थियो, जसले बाजेको जीवनलाई निकै प्रभाव पारेको थियो । त्यो थियो— रामायण पाठ । उहाँले खस भाषाको त्यतिका शिक्षा कहाँ कसरी प्राप्त गर्नुभो थाहा भएन । तर, उहाँ रामायणको अधिकांश श्लोक कण्ठस्थ सुनाउन सक्नुहुन्थ्यो । जतिजति बुढ्यौलीतिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यतित्यति त्यसको संक्रमण उहाँमा बढिरहेको थियो ।
बुढ्यौलीले निस्तेज पारेपछि जब आफैँ काम गरेर खान नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभयो, त्यसपछि मात्र बाजे–बोजु हामीसँग बस्न थाल्नुभएको हो । पाली–घरको सिकुवाको खटियामा उहाँहरू बस्ने–सुत्ने गर्नुहुन्थ्यो । बोजु त धेरै अगाडिदेखि नसाको रोगले हलचल गर्न सक्नुहुन्नथ्यो । उहाँको बाँकी जीवन ओछ्यानमै बित्यो । बाजे कहिल्यै घरभित्र प्रवेश गर्नुहुन्नथ्यो । वर्षको दुई तीनचोटि पितृ पूजा गर्दाबाहेक उहाँ कहिल्यै चुल्हामा पसेको हामीलाई थाहा छैन । त्यसैले खाने कुरादेखि सम्पूर्ण आवश्यकीय चीज खटियामै लगिदिनुपर्थ्यो । तमाखु मात्र होइन, जाडो याममा मकलमा आगोसमेत बालेर उतै पुर्‍याइदिनुपर्थ्यो । उहाँ राति सुत्दाबाहेक हमेसा मृगको पूर्णकायी छाला ओछ्याएर खटियामा आराम गर्नुहुन्थ्यो । त्यही मृगको छालामा बसेर उहाँ हामीलाई रामायणको मुखाग्र श्लोक सुनाउनुहुन्थ्यो ।
अब बाजे हामीलाई गुलेलीले ताक्न नसक्ने उमेरमा पुग्नुभएको थियो । हामी पनि बढिरहेका थियौँ । स्कुल जाने भइसकेका थियौं । आँगनमा उसैगरी खेल्थ्यौं । हाम्रो हो—हल्लाप्रति बाजेको प्रतिक्रिया उस्तै थियो । गुलेलीले हान्न नसकेपछि अब उहाँले हामीलाई श्लोकको झटारो हान्न थाल्नुभएको थियो । रामायण मात्र होइन वधूशिक्षाको उपदेश पनि उहाँलाई प्रायः कण्ठस्थ थियो । दिदीहरूलाई आँगनमा हाँस्दै जिस्किएको देख्नुभयो भने ‘हाँस्नु छैन कदापि नारीहरूले, बेश्या हुने हाँस्दछन्’ भनेर तुरुन्तै वधूशिक्षाको मट्याङ्ग्राले हानिहाल्नुहुन्थ्यो ।
यसरी बाजे हाम्रा लागि भानुभक्त पनि हुनुहुन्थ्यो, जो उहाँलाई अर्को नेपाल एकीकरणको भाष्यले दिएको अनुपम उपहार थियो । आधुनिक नेपालका विद्वान्हरू यसलाई सायद भाषिक एकीकरण भन्छन् क्यार ! तर, यसको निर्दोष सिकारको रूपमा भने मेरा बाजे आजीवन परिरहनुभयो ।
बाजे उमेरको डाँडामा पुग्दै गर्दा म किशोरवयको रफ्तारमा थिएँ । उहाँ अब पहिलेको जस्तो हुनुहुन्नथ्यो । उहाँभित्रको पृथ्वीनारायण सेलाइसकेको थियो । त्यसमाथि थप वृद्धावस्थाको शरीरमा उहाँ केहीअगाडि घाइते पनि हुनुभएको थियो । बाटोमा जुधिरहेको गोरुले घचेटेर उहाँलाई एक कान्लामुनि पछारिदिएको थियो । त्यसैको कारणले उहाँको खुट्टा स्थायी रूपले घाइते हुन पुग्यो । उहाँ धेरै टाढासम्म हिँड्न सक्नुहुन्नथ्यो । म स्कुलको लामो बिदामा घर फर्केको बेला अक्सर बल्छी बोकेर खोला झर्ने गर्थें । पहाडी गाउँ । खोला धेरै टाढा पर्थ्यो । त्यसैले खोलाबाट फर्किन मलाई कहिलेकाहीँ अबेर हुन्थ्यो । म खोला झरेको थाहा पाएपछि बाजे म नफर्किएसम्मै खाना खान मान्नुहुन्नथ्यो । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, ‘नाति आओस् । अनि मात्रै खान्छु ।’ यसरी बाजेकै लागि मात्र भए पनि मैले बल्छीमा केही न केही माछा पार्नैपर्थ्यो, जसका लागि उहाँ मलाई राति अबेलासम्म पर्खेर बसिराख्नुहुन्थ्यो ।
राति सुत्दा पनि त्यो रित्तो पालीको सिकुवामा अक्सर बाजेको स्वरबाट रामायणको श्लोक गुन्जिन्थ्यो । यसको अर्थ बाजेमा अब पृथ्वीनारायणको सट्टा भानुभक्त हाबी हुँदै आइरहेको थियो । मानिसलाई बाँच्नका लागि कथा चाहिन्छ । गीत, काव्य आदि चाहिन्छ । यो सत्य हो । तर, उहाँले जे गर्नुभएको थियो, त्यो कथित एकीकरण नामको भाष्यले दिएको दोस्रो अनुदान थियो । कथित भाषिक एकीकरणको शताब्दीयौं लामो छायामा आफ्ना भाषा, कथा र सम्पूर्ण शैक्षिक सत्ता गुमेपछि मानिसले के गर्छ ? बस् मेरा बाजेले त्यही गर्नुभयो ।
तर, यति हुँदाहुँदै पनि उहाँभित्रको एउटा चेत भने कहिल्यै मरेन । त्यो हो गणतान्त्रिक चेत । यसकारण कि त्यो उहाँभित्र हुर्किरहेको एक अक्षुण्ण संस्कृति थियो ।
यतिन्जेलसम्म कहिले पृथ्वीनारायण शाह, कैले भानुभक्त आचार्यको रूपमा हामीले बाजेलाई बुझ्यौं । तर, बाजे खास के हुनुहुन्थ्यो ? अब म त्यतातिर मोडिन चाहन्छु ।
२०३४ सालतिर म कलेज पढ्न काठमाडौं आएँ । भोजपुरमा उतिबेला एयरपोर्ट बनेकै थिएन । त्यसैले काठमाडौं आउँदा दुई दिन अरुणको अक्करैअक्कर हिँडेपछि पुगिने धरान हुँदै आउनुपर्थ्यो ।
कलेज बिदाको बेला एक हिउँद म घर फर्केको थिएँ । अचानक बाजेले सोध्नुभो, ‘के छ नेपालका राजाको हालखबर ?’
बाजेको यस्तो प्रश्नले एक छिन त म हतप्रभ बनेँ र उत्तर दिएँ, ‘ठीकै छ बाजे ।’
फेरि सोध्नु भो, ‘राजा सन्चै छन् ?’
भनेँ, ‘सन्चै छन् ।’
‘कैलेकाहीँ भेट हुन्छ ?’
‘किन एउटै देशमा पनि भेट नभाको त ?’
‘आ–आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छौं, त्यसैले बाजे... ।’
बाजेले यस्तो चाखलाग्दो प्रश्न सोध्नुभएको पनि आज लगभग चारौं दशक नाघिसक्यो । उहाँ बित्नुभएकै पनि तीन दशक त बिती नै सक्यो । यत्रो लामो समयसम्म पनि त्यो छोटो वार्तालाप मभित्र यस्तरी सुरक्षित छ कि आज बल्ल लागिरहेछ, त्यो सामान्य लाग्ने प्रश्नभित्र त स्वयं बाजे बाँचिरहनुभएको रैछ । वास्तवमा त्यो सामान्य प्रश्नमा बाजेको खास रूप अभिव्यक्त भएको रैछ ।
यतिखेर अर्थ केलाउँदा, बाजेको त्यो हठाथ प्रश्नबाट पहिलो त यो बुझ्न सकिन्छ कि नेपाल भन्ने एउटा यस्तो देश छ, जुन उहाँको देश होइन । दोस्रो, नेपाल भन्ने देशमा कोही एउटा राजा छ तर उहाँको देशमा राजा छैन । तेस्रो, त्यो जुनसुकै राजा होस् ऊ बाजेको समकक्षी हो । र चौथो, राजा जोसुकै होस् ऊ सामान्य नागरिक बराबर हो । यसरी बाजेभित्र एक यस्तो अनपेक्षित चीज बाँचिराखेको थियो, जसको बारेमा सोच्दा पनि यतिखेर हामीलाई अनौठो लाग्न सक्छ ।
अब हामी एउटा गाँठी प्रश्नतर्फ एक छिन विचार गरौँ । त्यो अनौठो लाग्ने विचार, जो बाजेभित्र आफ से आफ बाँचिराखेको थियो के त्यो त्यत्तिकै प्रकट भएको मजाक थियो ? अवश्य थिएन । किनभने त्यो हजारौं वर्षको समयखुट्टीले निर्माण गरेको एउटा छुट्टै सांस्कृतिक कडी थियो । इतिहासले वर्णन गर्छ, लिच्छविहरूको आक्रमणपछि तिनीहरूको शासनमा बस्न नचाहने अथवा लिच्छवि राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अस्वीकार गर्ने किरातीहरू अनेकपटक काठमाडौं छाडेर पूर्वतर्फ लागेका थिए । नेपाल खाल्डोमा पहिलोचोटि स्थापित हुन गइरहेको राजतन्त्रसँग केही किरातीहरूले त्यतिबेलैदेखि सम्बन्धविच्छेद गरेका थिए । तब यो स्वयंसिद्ध छ कि उनीहरू त्यतिबेलैदेखि कुनै पनि राजालाई चिन्दैनथे । लिच्छवि शासनलाई स्विकारेर बस्ने बाँकी मान्छेहरू यतै छुटे पनि पूर्व जानेहरूले गणतान्त्रिक चेत बोकेरै गएका थिए । त्यही भएर यता छुट्ने मान्छेहरू एउटा संस्कृतिमा बाँचे, उता जानेहरूले अर्को संस्कृति बँचाए । यता छुट्नेहरू त्यसपछि अविच्छिन्न राजतन्त्रमा हुर्किए उता लाग्नेहरूले स्वायत्त जीवन हुर्काए । पछि सेनकालमा समेत पूर्वेलीहरूले स्वशासित जीवनकै अकण्टक अभ्यास गरेका थिए । यहाँसम्म कि नेपालको पहिलो ३२ पुस्ते किरातकालमा समेत उनीहरू राजाको प्रत्यक्ष शासनअन्तर्गत थिएनन् । किनभने यलम्बर होस् या गस्ती कोही पनि वंशानुक्रमका राजा थिएनन् । उनीहरू सबै गण नायकहरू थिए ।
अब प्रश्न उठ्छ । त्यसो भए के मेरा बाजे लिच्छविकालमा पूर्व पसेका किराती पुर्खाका सन्तान हुनुहुन्थ्यो ? अथवा त्यो नभए के ती पुर्खाहरूको सांस्कृतिक र वैचारिक समकक्षी हुनुहुन्थ्यो ? यदि त्यसो हो भने ठोकेर भन्न सकिन्छ, पृथ्वीनारायण त के पूरै पाँच हजार वर्षदेखि मेरा बाजेको चेतनामा कुनै राजा थिएन । त्यही भएर उहाँ सार्वकालिक र आजीवन गणतन्त्रवादी हुनुहुन्थ्यो ।
अहिले पनि जब देशमा राजाको बासी कुण्ठा यदाकदा पुनरावृत्त हुन खोज्छ र काठमाडौं उपत्यका उही पुरानै राजनीतिक निरपेक्षतामा निदाउँछ, मलाई लाग्छ— गणतन्त्र भनेको त वास्तवमा विचार मात्रै होइन रैछ । यो त अविच्छिन्न संस्कृति पनि रैछ । जुन संस्कृति चाहेर पनि सबै कोहीमा नहुन सक्छ । त्यही नहुनुको कारणले अहिले पनि कसैलाई संघीयता दुख्छ । कसैलाई कसैको पहिचान अपच लाग्छ । र, कसै कसैले चाहिँ गणतान्त्रिक देशमै पनि राजारानीको नक्कल गर्नुपर्छ ।
सन्दर्भ बाजेको थियो । फेरि बाजेमै फर्किन चाहन्छु । मेरा बाजे कुनै विद्रोही हुनु हुन्नथ्यो । मात्र राजा नामक पुरानो भाष्यका लागि निरक्षर हुनुहुन्थ्यो । त्यो निरक्षरता उहाँको संस्कृति पनि थियो । अहिलेको भाषामा भन्ने हो भने त्यो राजनीति पनि थियो । त्यही संस्कृतिलाई अद्यावधिक गरेर वा राजनीतीकरण गरेर देश अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो । किनभने रूपान्तरणका लागि समयअनुसार आफूलाई अद्यावधिक गर्न जरुरी छ । आवश्यक पर्दा संस्कृतिलाई पनि निर्णायक शक्तिमा बदल्न सक्नुपर्छ । यसैमार्फत अंशअंशमा लडिरहनुपर्ने मुद्दा मुष्टमा प्राप्त हुन्छ । र, त्यो अद्यावधिक हुनु भनेको अर्को भाषामा राजनीतीकरण हुनु पनि हो । त्यही राजनीतीकरणको अरू थप आशा र भरोसामा काठमाडौं उपत्यकाका नेवाः समुदायलाई सलाम पनि भनिएको हो ।
अन्त्यमा, अब सबैलाई थाहा भइसक्यो । मेरा बाजे सबैका लागि असल हुनु हुन्नथ्यो । यसो भन्दा मलाई कुनै लज्जाबोध हुँदैन । मात्र यति छुटाउनु हुँदैन, उहाँले प्राप्त गर्नुभएको विरासत भने लगभग पाँच हजार वर्षदेखि नै राजाविहीन थियो ।
प्रकाशित : मंसिर ६, २०७७ ११:१९
नेपालको पहिचानवादी कसरत सांस्कृतिक मात्रै हो कि राजनीतिक पनि हो ? यदि सांस्कृतिक मात्रै हो भने वर्षमा एकचोटि वेशभूषासहित टुँडिखेलमा साकेला नाच्दा पुगिहाल्छ । होइन राजनीतिक पनि हो भने मुक्तिको वैचारिक दिग्भ्रमता किन ? पहिचानको लडाइँ खास कसका लागि हो ? सबैका लागि हो भने त्यो खिया परेको भाष्यको हतियार उध्याइरहनु किन ?
आश्विन ९, २०७७ भूपाल राई
काठमाडौँ — त्यसो त यो कथा नलेखे पनि हुने हो । जस्तो दुनियाँमा नलेखे पनि हुने धेरै कथा छन् । तिनीहरू जो लेखिएका छन्, त्यसैले मात्र ती कथा बनेका छन् । नलेखिएका कति कथा होलान्, जो सायद व्यथाका रूपमा लुकेर बसेका होलान् । तर, यो कथा जुन यहाँ लेखिएको छ, व्यथा विरेचनको अकिञ्चन प्रयास वा आत्मतुष्टिको नितान्त निजी विज्ञापन मात्र होइन ।
बरु यसका खास कारण छन् । आउनुस्, ती कारण बताउनुअघि त्यो एक थान गीत, जसको कथा यतिखेर उत्खनन गर्न खोजिँदै छ, त्यसलाई एकचोटि हेरौं–
यो तिम्रै माटो हो तिमीले टेकेको
यो तिम्रै आकाश हो तिमीले ओढेको
आमा यसरी कथा सुनाउँछिन्–
अघि बढ्नेलाई खुला बाटो छ
पछि अड्नेलाई मुरी माटो छ
यी चिहान चौतारी निसानीका चित्र
इतिहास नमाग्ने तिमी भूमिपुत्र
तिमी आवादी हौ भष्मे खोरिया हौ
सिस्नोको जरामा फुल्ने सारंगी हौ
उठी हिँड्नेलाई यात्रा दायाँ छ
थाकी बस्नेलाई छायैं छायाँ छ
पुर्खाले रोपेको तिमी फुल्दो हाँगा
तिमी आफ्नै घरमा आफैँ बास नमाग
तिमी मूलढोका हौ सर्वस्वका धनी
सृष्टिमै तिमी जो थियौ हिमालमुनि
माथि चढ्नेलाई चुली बाँकी छ
तल झर्नेलाई फेदी काफी छ ।
२०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा विजयी किराती सांसदहरूको सम्मानमा काठमाडौंमा एक कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रम विशेष किन थियो भने त्यो पहिलो जनआन्दोलनपछिको पहिलो संसदीय निर्वाचनको परिणाम थियो । किरात राई यायोख्खाद्वारा आयोजित सो कार्यक्रममा पहिलोचोटि एउटा गीत गुन्जिन पुग्यो । काठमाडौंको बार एसोसिएसनको हलमा पहिलोचोटि गुन्जिएको त्यो गीत त्यतिखेरका केही सीमित किराती कलाकारहरूले प्रस्तुत गरेका थिए । र, त्यो त्यही गीत थियो, जसलाई बडो आत्मविज्ञापित शैलीमा यस आलेखको थाप्लैमा राख्नुपर्ने भयो ।
अब भने जाऊँ कारणतर्फ । किनभने प्रश्न उठ्न सक्छ, जाबो एउटा सानो गीतको यत्रो कथाकारिता किन ? कतिले साँच्चि नै आत्ममुग्धताको आक्षेप पनि लगाउन सक्छन् । तर, म यस कुरामा दृढ छु कि त्यस्ता केही कारण अवश्य छन्, जसले त्यो गीतको कथालाई पुष्टि गर्नेछन् । ती कारणहरू यस्ता छन्–
पहिलो, केही महिनाअगाडि एक अनलाइन पोर्टलमा लेखक राजकुमार दिक्पालको एक आलेख छापिएको थियो । शीर्षक थियो, ‘भूपाल राईको त्यो प्रतिबन्धित गीत’ । लेखमा एक सुदूर अतीतको गर्तमा हराइसकेको त्यो गीतलाई राजकुमारले जुन तात्पर्यताका साथ स्मरण गर्न पुगेका छन्, त्यसले मलाई आजभन्दा झन्डै तीन दशकअगाडि लगेर पछारिदिएको छ । लाग्यो, म आफैँले पनि अब त्यो गर्तलाई एकचोटि कोट्याउनैपर्ने हुन्छ । उनको त्यो सदाशयताले मलाई उमेरमा कतै छुटेको पहिलो प्रेम झल्याँस्स सम्झाएझैँ गरायो । तब किन आफ्नो त्यो वर्णातीत क्षणलाई आफैँले पनि एकचोटि सम्झेर ‘नोस्टाल्जिक’ हुने सुविधा नलिने त ? किनभने त्यो गर्तको सक्कली दुःख त आखिर मेरो आफ्नै थियो ।
दोस्रो, एउटा खास ध्येयका साथ रचिएको त्यो गीति–कविताले अनेक कालखण्डमा अनेक संकटको ढाट पार गरेर यहाँसम्म आइपुगेको खुसियालीमा कुनै घरपालुवा जनावरले आफ्नै पेटको सञ्चित घाँस चपाएझैँ एक छिन उग्राउँदै यो सहजकाल बिताउनुमा अन्यथा के नै होला र ! त्यसै पनि सुविधाजनक समयमा लेख्ने सुविधा पाएका सुविधाभोगी लेखकहरूको चर्को हल्ला–हंगामाको बीच त्यसको पनि सानो सुस्केरा त अवश्य छ नै । र, त्यो सुस्केराको झिनो कम्पन एकपल्ट हल्का सुनिदिँदा के नै बिग्रिएला र !
तेस्रो, कुनै समय विश्वज्योति हलमा हाउसफुलका साथ चलेको ‘रंगिला’ चलचित्रझैँ यतिखेर चलिरहेको पहिचान लेखनको फेसनबीच त्यो अकिञ्चन वस्तु आज काहाँ होला ? अथवा संकटको घडीमा त्यो एक्लै लडिरहेको बेला यतिखेरका पहिचानका स्वघोषित मसिहाहरू कहाँ थिए होलान् ? सामान्य चासो त अवश्य लाग्छ नै । र, लागेर कि यी दुवैका आ–आफ्ना ठाउँ–ठेगानाको बारेमा केही बहस त अब हुनैपर्छ ।
र चौथो, चालीसको उत्तरार्द्धतिर मैले जसरी गीति कर्मको वैकल्पिक बाटो हठाथ पक्रिनुपर्‍यो, त्यो त्यत्तिकै गरिएको थिएन । नेपालमा विद्यमान अनेक खाले विभेदसँगै जातीय विभेद र उत्पीडन पनि एक चर्को र प्रमुख समस्या थियो, जुन अद्यावधि छँदै छ । एकल जातीय र एकल सांस्कृतिक वर्चस्वको खिलाफमा जे जति कविता लेखिरहेको थिएँ, मलाई लाग्थ्यो त्यसले सोचेजस्तो काम गरिरहेको थिएन । अथवा त्यसले पार्ने प्रभाव एकदमै कमजोर थियो । किनभने जसको लागि भनेर कविता लेखिन्थ्यो, त्यो त्यहाँसम्म पुग्दैनथ्यो । पुगे पनि त्यो भनेजस्तो सम्प्रेष्य हुँदैनथ्यो । यही समस्याका कारण मैले कविताको समानान्तर अर्को बाटो पक्रिन पुगेको हुँ । यसर्थ कि सम्प्रेषणको हिसाबले ‘गीत’ कविताभन्दा निकै नै सहज र शक्तिशाली हतियार थियो । त्यसैले मैले धेरै ठाउँ, धेरैपटक भनेको पनि छु ‘गीतकारिता’ मेरो बाध्यताको उपज हो ।
र, त्यो गीत मेरो त्यही समानान्तर हतियारको एक कडी थियो ।
लगभग तीन दशकअगाडि । अर्थात् ०४८ सालको एक अपराह्न । बार एसोसिएसनको त्यो सानो हल । बस् यहीँबाट सुरु हुन्छ अब त्यो गीतको कथा ।
मलाई थाहा छ, कथाको नाममा कुनै अतिरञ्जना बाँड्नु हुँदैन । तर, यसको अर्थ यो पनि होइन कि भएका कुराहरू छुट्न पुगोस् । म ढाँट्दिनँ, आरम्भमा जुन हलबाट त्यो सुरु भएको थियो, निःसन्देह त्यो एक सामान्य गीत मात्र थियो, जसलाई दुई–चार जना कलाकारले गाएका थिए । तर, जब गीत हलबाहिर निस्कियो त्यो एउटा सामान्य गीत मात्र भएर निस्किएको थिएन । एकाएक निकै ठूलो आयाम लिएर त्यो त्यहाँबाट निस्कियो । गीतले प्रक्षेप गरेका शब्दहरूभन्दा माथि अर्थको निकै अग्लो उचाइका साथ । अझ हलभन्दा पर पुगेर त झन् त्यो बिस्तारै गीतभन्दा बढी विचारको वाहक भएर गुन्जिन थाल्यो । पछि यस्तो हुँदै आयो किरातीहरूका प्रत्येक सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रम र आन्दोलनहरूका सबभन्दा पहिलो मोर्चा त त्यसैको बलमा उठ्न थाल्यो । आत्मप्रशंसा नठानियोस्, कतिपय बहस, शोध र कार्यपत्रहरूमा समेत त्यसले वैचारिक ठाउँ पाउन थाल्यो । यसरी दुई–चार जना किराती सांसदहरूको श्रवणसुखबाट सुरु भएको त्यो गीत पूरै किराती समुदायमा समाहित हुन पुग्यो । एउटा ठूलो समुदायको बैचारिक खुराक बन्यो । कालान्तरमा त्यो अधिकांश किराती कलाकारको साझा गीत बन्यो । आज केही अपवादलाई छाडेर त्यस्ता कोही नयाँ–पुराना किराती कलाकार छैनन्, जसले त्यो गीत नगाएका होऊन् । गीतको तुलनात्मक शक्ति र सामर्थ्यको जुन संकेत मैले माथि गरेको थिएँ, त्यो साँच्चि नै त्यसमा पुष्टि हुन पुगेको थियो ।
यति नै खेर मलाई राजकुमार दिक्पालको माथि वर्णित आलेखको एउटा अंश याद भइरहेछ । त्यही गीतले स्थापित गरेको वैचारिक आकर्षणलाई आकलन गरेर हुन सक्छ, उनले मेरो गीत (कारिता) र किराती कलाकारबीचको सम्बन्धलाई जान अञ्जानमा ‘माहुरी र रानो’ को उपमा प्रयोग गर्न पुगेछन् । लगत्तै, एक अर्को लेखकको खण्डनले त्यसलाई देवत्वकरणसँग दाँज्न पनि भ्याइहालेछ । देवत्वकरणको बारेमा यहाँ बहस नगरूँ । तर, माहुरी र रानोको सम्बन्धबारे भने केही भन्नैपर्छ । एकैठाउँ वा एउटै चरनमा माहुरीहरूको सयौँ घार राखौँ । प्रत्येक घारका बीस–पच्चीस हजार माहुरीहरू सरासर आ–आफ्नै घार पहिल्याएर फर्किन्छन् । एउटै माहुरी पनि झुक्किएर वा अलमलिएर छिमेकी वा अर्काको घारमा पस्दैनन् । यस्तो कसरी सम्भव हुन्छ ? यस्तो किन हुन्छ भने प्रत्येक घारको प्रत्येक रानीले आ–आफ्ना माहुरीहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि छुट्टाछुट्टै रसायन उत्पादन गर्छन् । छुट्टाछुट्टै बासना फ्याँक्छन् । त्यही रसायन पहिल्याएर हजारौँ माहुरी नअलमलिईकन आ–आफ्नो घार फर्किन्छन् । यसरी रानोको त्यो रसायन प्रक्रियासँग देवत्वकरणको अन्धता दाँज्नु सही हुँदैन । यी दुई अलग–अलग विषय हुन् । बरु रानोको त्यो रसायन प्रक्रिया र मान्छेको वैचारिक आकर्षणबीच भने केही न केही साम्यता अवश्य छ । केवल आफ्नो प्रशंसा मात्रै सुन्ने बानी परेको, तर अर्काको बारेमा कसैले एक शब्द खर्चेको सुन्दा पनि ‘तनाव’ हुने मानिसका निम्ति यो विषय अपच हुन सक्छ ।
त्यही आकर्षण र सद्भावले बिस्तारै त्यो गीतको कथाले अर्कै मोड लिन थालेको थियो । धेरैको सुझाव थियो, ‘रेडियो नेपालमा रेकर्ड गरेर त्यसलाई अझ सर्बव्यापी बनाऊँ । झन् सर्वग्राही बनाऊँ ।’ सुझाव र सकारात्मक दबाबका कारण सोच पनि त्यस्तै बन्यो । रेकर्डका लागि रेडियो नेपालमा डेट माग्नुपर्थ्यो, मागियो । रेडियो नेपाल त्यतिखेरको एक मात्र निर्विकल्प सञ्चार शक्ति वा राज्यको एकमना सांस्कृतिक संयन्त्र थियो । रेकर्ड गर्नुअगाडि नै पास गरिसक्नुपर्ने नियम हुनाले गीत अग्रिम बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसका लागि त्यहाँ एउटा अनौपचारिक सेन्सर बोर्डजस्तो हुन्थ्यो । अथवा बोर्डको नाममा एउटा खास संस्थापकीय धारणा र तजबिजले ग्रस्त एक दुई सदस्य हुन्थे ।
रेकर्डिङको मिति नजिक आइसकेको थियो । तर, अचानक गीत अस्वीकृत भएको संकेत आयो । कुरा बुझ्न सेन्सर बोर्ड खोज्दै गएँ । कुर्सीमा एक जना त्यतिखेरका ख्यातिप्राप्त गजलकार बोर्डको गुरुत्तम भारी थामेर बसिरहेका भेटिए ।
सोधेँ, ‘मेरो गीत के भो ?’
ख्यातिप्राप्त बोर्डले भन्यो, ‘तपाईंको गीत अस्वीकृत भयो ।’
फेरि सोधेँ, ‘किन ?’
जवाफ आयो, ‘केही शब्दहरू आपत्तिजनक छन् ।’
बिनाकुनै बहस मैले अन्तिम प्रश्न गरेँ, ‘खोइ मेरो गीत फिर्ता दिनोस् । म बुझ्न चाहन्छु, त्यहाँ कुन–कुन शब्दहरू आपत्तिजनक छन् ?’
एक सदस्यीय बोर्डले गीतको हस्तलिखित पाना फिर्ता दियो । सर्सर्ती हेरेँ । त्यसमा प्रयुक्त भूमिपुत्र, भष्मे खोरिया आदि शब्दहरूमा रातो रेजा लागेको थियो ।
यसरी त्यो गीतको कथाले अर्कै मोड त लिँदै थियो । तर, साथसाथै त्योसँग जोडिएर आउने संकटको घडी पनि त्यहीँबाट सुरु हुन पुगेको थियो । पहिलो जनआन्दोलनको ऐतिहासिक धक्काले निरंकुश पञ्चायत ब्यवस्था ढलिसकेको थियो । प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भइसकेको थियो । अनेक बागी विचार र प्रतिबन्धित सृजनाहरूले फुकुवा पाइसकेका थिए । तर, त्यही खुला र प्रजातान्त्रिक देशले मेरो गीतमाथि संकटकाल लगाएको थियो । यसरी प्रजातान्त्रिक भनिने तथाकथित ब्यवस्थामा पनि मेराजस्ता केही मुक्तिकामी विचार अस्वीकृत हुन्थे ।
तर, मैले हार खाइनँ । अस्वीकृत गीत बोकेर म सरासर रेडियो डाइरेक्टरको कक्षमा गएँ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, त्यतिखेर डाइरेक्टर शैलेन्द्रराज शर्मा थिए । रातो रेजा लागेको गीतको पाना जस्ताको तस्तै उनको हातमा थमाउँदै मैले भनेँ, ‘ल भन्नुस् यी शब्दहरू के कारणले आपत्तिजनक भए ? के यिनीहरू गैरनेपाली शब्द हुन् ?’
मैले अझै थपेँ, ‘यदि यो गीत कुनै कुत्सित पूर्वाग्रहवश अस्वीकृत ठहराइन्छ भने म सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य हुनेछु ।’
मेरो कुराले के प्रभाव पार्‍यो कुन्नि, सेन्सरको कुनै दुहाई नदिई भोलिपल्ट सहजताका साथ रेकर्डिङको अवसर प्राप्त भयो । यो सम्भवतः ५०–५१ सालतिरको कुरा हो ।
त्यसपछि रेडियो नेपालबाट केही समय त्यो गीत निर्बाध रूपले बज्यो, बजिरह्यो । कति महिना वा वर्षपछि हो मलाई हेक्का छैन, एक दिन अचानक नेपथ्य ब्यान्डका गायक तथा अभियन्ता भाइ अमृत गुरुङको फोन आयो, ‘दाइ, एउटा नयाँ खालको राष्ट्रिय गीत रेडियो नेपालले प्रसारण गरिरहेको सुनेँ । त्यो तपाईंको गीत रहेछ । नेपाल टेलिभिजनको लागि छायांकन गर्दा कसो होला !’
अमृत गुरुङको शब्द ठ्याक्कै यही थियो कि थिएन मलाई त्यो पनि हेक्का छैन । तर, उनको आशय भने ठ्याक्कै यही थियो । उनी त्यतिखेर केही समयका लागि नेपाल टेलिभिजनमा आबद्ध हुन पुगेका थिए र केही राम्रा र अर्थपूर्ण राष्ट्रिय गीतहरूको निर्माणमा जुटेका थिए । पछि उनकै सक्रियता र परिकल्पनामा त्यो गीत नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोमा छायांकन हुन पुगेको थियो । र, धेरैचोटि मेरा आफ्नै आँखालाई समेत उनको त्यो सत्प्रयास हेर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो ।
यो घटना त्यो संकटग्रस्त गीतको कथामा जोडिन आइपुगेको एक सुखद मोड थियो ।
२०५४ सालमा पूर्वमा खम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (खरामुमो) सशस्त्र विद्रोहका लागि भूमिगत भयो । तत्कालीन राज्य र विरोधी तप्काको भाषामा जंगल पस्यो । भोजपुर जिल्लाको दिङ्ला र गोगनेस्थित दुइटा संस्कृत विद्यालयमाथि भौतिक कारबाही गरेर सुरु भएको त्यो विद्रोहको मूल उद्देश्य विद्यमान जातीय विभेद र उत्पीडनकै निर्मूलीकरण थियो । दुई, सवा दुई सय वर्ष पुरानो एकल नस्लीय र केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको चरित्रमाथिको सशस्त्र जेहाद थियो त्यो । उता त्योभन्दा अगाडि पश्चिम नेपालबाट सुरु भएको माओवादी ‘जनयुद्ध’ ले देशव्यापी प्रभाव जमाइरहेको थियो । राज्यसत्ताको आँखामा यी दुवै घोर आतंककारी थिए । देश गृहयुद्धको विकराल चपेटामा फसिरहेको थियो ।
यही बेला, मैलेसमेत थाहै नपाई रेडियोमा बजिरहेको त्यो गीतलाई टपक्क टिपेर खरामुमोले आफ्नो अघोषित राष्ट्रिय गीत बनाएछ । उसका कार्यकर्ताहरूले पूर्वी पहाडका विद्यालयहरूमा त्यतिखेरको ‘श्रीमान् गम्भीर’ भन्ने राष्ट्रिय गीतलाई हटाएर त्यो गीत गाउन लगाउन थालेछन् । यहाँसम्म कि उनीहरूले आफ्ना हरेक कार्यक्रम र कारबाहीमा समेत त्यही गीत प्रयोग गर्न थालेछन् ।
नेपालमा खास–खास विचारसँग आवद्ध, पार्टी निकट र आन्दोलनसँग जोडिएका त्यस्ता धेरै सामयिक गीत–संगीतहरू अवश्य छन् । तिनीहरूले समयसमयमा जनमानसलाई जागृत गर्ने, जनलहर परिचालन गर्ने कामहरू पनि गरेका छन् । म आफैँले पनि त्यस्ता कैयौँ गीत गाएर आफ्नो युवाकाललाई ऊर्जावान बनाएकै हुँ । ‘आमा दिदी बहिनी हो’, ‘बसाइँ हिँड्नेको ताँतीले’, ‘एक युगमा एक दिन एकचोटि आउँछ’, ‘गाउँगाउँबाट उठ’ जस्ता अनेक गीत मेरा युवाकालका उत्प्रेरक गीत अवश्य थिए । तर, मिहिन ढंगले नेपालको सामाजिक संरचना र त्यसको विशिष्टता बुझेर त्यसभित्र विद्यमान जातीय उत्पीडनलाई उजागर गर्ने गीत त्यतिबेलासम्म सायद थिएन । यसर्थ कि नेपालको वर्गभेद र यहाँको वर्गीय संरचना आफैँमा विशिष्ट छ, यो प्रत्क्षतः वर्णाश्रम ब्यवस्था र जातीय संरचनाको जगमा उभिएको छ भन्ने कुरा उनीहरू स्वीकार गर्दैनथे । मैले त्यही अदेखा आयाम र सृजनात्मक अभावलाई पूरा गर्ने सानो कोसिस गरेको थिएँ त्यो गीतमा । नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियता सबल नबनी देश नबन्ने वैचारिक सचेतताका साथ नै मैले त्यसमा जातीय मुक्तिको संकेत गरेको थिएँ ।
माथि पहिचानको विषयमा पनि थोरै प्रसंग उठिसकेको छ । मुक्ति र स्वाधीनताका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनको इतिहासलाई एक छिन थाती राखेर केवल शब्दको बजारीकरणलाई मात्र ध्यान दिने हो भने यो (पहिचान) नेपालका लागि नयाँ भाष्य हो । यो खासगरी दसवर्षे ‘जनयुद्ध’ ले उत्खनन गरेको सबैखाले मुक्तिको आलोकमा दोस्रो जनआन्दोलनपछि झुल्किएको नयाँ शब्दावली हो । तर, मैले तीन दशकअगाडि जुन गीत तयार पारेको थिएँ, त्यो अहिले प्रचलित पहिचानजनित हल्लाका लागि थिएन । त्यो एउटा खास वैचारिक आधार र खास दर्शनको जगमा लेखिएको एक खास मुक्तिको संखघोष थियो । मलाई यसो भन्दा खुसी लाग्छ कि म अहिले पनि कुनै स्वघोषित पहिचानवादी सर्जक नभएर एक सचेत जातीय र राष्ट्रिय मुक्तिवादी लेखक हुँ । प्रकारान्तरले म अवश्य पहिचानवादी लेखक पनि हुँला तर समूल जातीय मुक्तिको सैद्धान्तिक धुरी भत्काएर होइन । किनभने मलाई लाग्दैन कि नेपालमा प्रचलित पहिचानको दिग्भ्रमित कसरतबाट मेरो जातिलाई मुक्ति प्राप्त हुनेछ । मैले त चाहेको समुल मुक्ति हो, जो खास बैचारिक बलबाट अनुप्राणित छ । नेपालको पहिचानवादी कसरत ठीक यहीँनेर चुकेको छ । त्यो मुक्तिको सैद्धान्तिक लिकबाट उछिट्टिएर फेसन र हल्लाको बजारमा छरिन पुगेको छ ।
यही सन्दर्भमा भनिहालूँ । केही–केही पहिचानको ठेक्कापट्टा चलाउने लेखकहरू, जो पहिचान लेखनको सुरुआत आफैँबाट भएको चर्चा गर्छन्, तिनीहरूलाई लाग्छ कि म एक भूतपूर्व पहिचानवादी लेखक हुँ । तर, तिनलाई हेक्का छैन, जो पहिचानको दिग्भ्रमित हौवा फैलाएर सम्मानित हुने सर्तमा कहिल्यै पहिचानवादी भएन ऊ कसरी भूतपूर्व पहिचानवादी हुन्छ ? पहिचानवादीहरूले आफैँलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, नेपालको पहिचानवादी कसरत सांस्कृतिक कसरत मात्रै हो कि राजनीतिक पनि हो ? यदि सांस्कृतिक मात्रै हो भने वर्षमा एकचोटि वेशभूषासहित टुँडिखेलमा साकेला नाच्दा पुगी नै हाल्छ । होइन राजनीतिक पनि हो भने फेरि मुक्तिको वैचारिक दिग्भ्रमता किन ? र, अर्को कुरा पहिचानको लडाइँ खास कसको लागि हो ? त्यो उत्पीडित वर्गका लागि मात्रै हो कि उत्पीडकका लागि पनि हो ? यदि सबैका लागि हो भने त्यो खिया परेको भाष्यको हतियार उध्याइरहनु किन ? संविधानमै ‘खस आर्य’ जातिको पहिचान सूचीकृत भइसकेपछि पहिचानको लक्षित मुद्दा र नारा नै प्रदूषित भैसकेको अनुभूति हुँदैन र ?
एक सशस्त्र विद्रोही शक्तिले त्यो गीतलाई आफ्नो राष्ट्रिय गीत बनाएको खबर सुनेपछि मलाई लाग्यो, बल्ल त्यसले आफूले परिकल्पना गरेको दुनियाँ भेटेछ । रेडियोमा बज्दा त्यसले व्यापक बजार त पाएको थियो । तर, त्यसले उचालेको वैचारिक धर्मिताको खोज बजार थिएन, कुनै लक्षित विचारको केन्द्र थियो । कतै हराएको बालकले अचानक आमाको काख पाएजस्तै त्यसले आफूले खोजिरहेको काख पाएको थियो । किराती समुदायबाट सुरु भएको त्यो सामान्य गीतले अब बल्ल स्कुलका विद्यार्थीहरूको ओठ पाएको थियो । विद्रोही लडाकुहरूका लागि विचार निर्माणको काम गरिरहेको थियो । शान्तिप्रक्रिया पछाडि मलाई कत्ति लडाकुहरूले भेटेर भनेका थिए, ‘हामी त्यही गीत सुनेर क्रान्तिमा होमिन प्रेरित भएका हौँ ।’ यसरी कुनै सशस्त्र मोर्चाको कार्यक्रमसँग आबद्ध हुने, तिनीहरूको कार्यसूचीकै एक अंग भएर रहने र प्रत्यक्ष जीवनको रूपान्तरणसँगै जोडिने सौभाग्य दुनियाँका कमै रचनाले पाएका होलान्, जुन सौभाग्य त्यो गीतले प्राप्त गरेको थियो ।
त्यो घटनाको सूचना बिस्तारै सहरसम्म पनि आइपुग्यो । त्यसपछि बिस्तारै रेडियो नेपालबाट त्यो गीत बजेको सुन्न छाडियो । नेपाल टेलिभिजन वा अरू कुनै पनि सञ्चारगृह, जहाँजहाँबाट त्यो गीत प्रसारण हुने गर्थ्यो, सबैबाट क्रमशः त्यसको नाम निसाना हट्दै जान थाल्यो । मैले कतै त्यसको विषयमा खोजीनिती गरिनँ पनि । एकैचोटि ५६–५७ सालतिर उनै राजकुमार दिक्पालले मलाई खुसुक्क सूचना दिए, ‘त्यो गीत खरामुमोले राष्ट्रिय गीत बनाएपछि प्रतिबन्धित भएको छ ।’ राजकुमारलाई त्यो गुह्य कुरा यसकारणले थाहा थियो कि उनी केही समय धनकुटा क्षेत्रीय रेडियो स्टेसनको सूचना संकायमा कार्यरत थिए ।
यसरी फेरि अर्कोचोटि त्यो गीतमाथि संकटकाल लागेको थियो । एक प्रजातन्त्रिक देशमा एउटा मुक्तिकामी विचार प्रतिबन्धमा परेको थियो ।
यो, त्यो गीतको कथामा आइलागेको अर्को अलग मोड थियो ।
कथा हो । सानातिना घटना जोड्नैपर्छ । तब न बुनिन्छ कथा !
५७ साल । पूरै देशमा राजनीतिक संकट चर्किरहेको थियो । माओवादी र तत्कालीन सरकारबीच वार्ता हुँदै–टुट्दै गइरहेको थियो । यता माओवादी र खरामुमोबीच पनि एकताको प्रयास भइरहेको थियो । ५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डपछि त झन् सत्ताको बागडोर ज्ञानेन्द्रको हातमा पुग्यो । सबैखाले राजनीतिक गतिविधि र विचारमाथि अंकुश लाग्न थाल्यो । भेला, सम्मेलनमाथि निगरानी बढ्यो । वाक् स्वतन्त्रता धरापमा पर्‍यो । जताततै सुरक्षाकर्मीहरूको खानतलासी बढ्यो ।
यस्तै बेला पूर्वबाट निर्देशन आयो । काठमाडौंबाट मेरो सम्पादकत्वमा खरामुमोको मुखपत्र छाप्नुपर्ने भयो । म उतिबेला काठमाडौंमै रहेर पनि खरामुमोको अघोषित सहयोगी–शुभचिन्तक थिएँ । युद्धका अनेक प्रकाशन सामग्रीहरू र जनकारबाहीका सचित्र क्रियाकलाप उतैबाट आउँथे । इन्टरनेटको जमाना थिएन । सामग्रीहरू बडो जोखिमका साथ कार्यकर्ताले नै जोगाएर ओसारपसार गर्नुपर्थ्यो । मोर्चालाई सघाउ पुर्‍याउने बाँकी लेखरचनाहरू धरानका सहयोगी कुलचन्द्र राईका साथ काठमाडौंमै जुटाउनुपर्थ्यो ।
प्रकाशित हुने मुखपत्रको नाम रहने भो– ‘नव–चोमोलुङ्मा’ । तर, त्यतिखेर त्यस्ता सामग्रीहरू छाप्ने आँट भएका छापाखाना पाउनै मुस्किल थियो । छाप्नासाथ उठाइहाल्ने सर्तमा बल्लतल्ल पुतलीसडक न्यु प्लाजामा एउटा प्रेस फेला पर्‍यो । यसरी त्यो ‘नव–चोमोलुङ्मा’ को पहिलो अंकको पहिलो आमुखमा फेरि त्यही प्रतिबन्धित गीत छापियो । फेरि लाग्यो, त्यो तीन पाउको सानो रचना मात्र एउटा गीत थिएन । युद्ध–मोर्चामा डटिरहेको एउटा जिउँदो लडाकु थियो ।
म्याग्जिन आकारको मुखपत्र । पाँच पाँच हजार प्रति । हातमा बोकेको सानो पर्चाले समेत ज्यानै जोखिममा पार्न सक्ने संकटकालमा त्यत्रो सामग्री व्यवस्थापन गर्नु फलामको च्युरा चपाउनु बराबर थियो । प्रेसबाट अनेक जोखिम मोलेर सीधा धरानस्थित सेल्टर पुर्‍याउनुपर्थ्यो । त्यहाँबाट बल्ल त्यस्तै जोखिमका साथ त्यो उँभो पहाड उक्लिन्थ्यो ।
यसरी पहिलो अंक त जसोतसो व्यवस्थापन गरियो तर दोस्रो अंक पठाउने उचित माध्यम नभेटेर आधीभन्दा बेसी पत्रिका प्रेसमै थन्किने अवस्था आयो । प्रेसले राख्न नमान्ने निश्चित थियो । त्यसैले बाँकी सबै सामग्री मैले डेरामै ल्याउनुपर्‍यो । त्यतिखेर मेरो डेरा डिल्लीबजार चारखाल अड्डाअगाडि थियो । भनिरहनु पर्दैन, कुनै सुइँको पाउनासाथ जतिबेला पनि सेनाले घर छापा मार्न सक्थ्यो । यसबाट बँच्नका लागि जसुले कहिले तिनीहरूलाई टाट्मुनि लहरै राखेर बिछ्याउँथिन्, कहिले पुरानो घरको अँध्यारो ट्वाइलेटको तख्तामा थाक लगाएर लुकाउँथिन । कैयौं दिनसम्म तिनको त्यो व्यस्त दैनिकी नै बनेको थियो ।
पञ्चायतकालमै पनि गोपालप्रसाद रिमालको ‘आमाको सपना’ पाठ्यक्रममै पढेको मान्छे म । भूपिको ‘हामी’, काइँलाको ‘मातेको मान्छेको भाषण...’ पढेर उहिले नै कलेजको परीक्षा दिएको मान्छे । तर, आफ्नै एउटा गीतमाथि लागेको पटकपटकको संकटकाल आफ्नै आँखाले भोग्दा आफैँ बाँचेको त्यो समय र व्यवस्थाप्रति म यतिखेर सशंकित हुन्छु । त्योभन्दा अझ बढी सहज र सहकालमा पाउलिएका बेर्नाहरूले सम्पूर्ण आकाश थामेको चमत्कार देखेर अवाक बन्छु । आज पनि जसै म त्यो गीत सम्झिन्छु, सुविधाकालका सारा हल्ला र भुइँफुट्टा दाबीभन्दा संकटकालको त्यो एक पलबाट म बढी रोमाञ्चित हुन्छु ।
आउनुस्, अब भने कथाको अन्तिम परिच्छेदतिर जाऊँ ।
एकता प्रक्रियापछि खरामुमो माओवादी बनिसकेको थियो । यसपछाडि शान्तिप्रक्रियामार्फत माओवादी सार्वजनिक भयो । एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने खरामुमोसँगको एकतापछि माओवादीले ६० सालतिरै विभिन्न जातीय मुक्ति मोर्चाहरूलाई निसर्त रूपले अंगीकार गरेको थियो । त्यसैमध्येको एउटा थियो– किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (किरामुमो) । म त्यसको एक अनुमोदित संस्थापक सल्लाहकार थिएँ ।
६३ सालमा त्यही किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको पहिलो एकता सम्मेलन धरानमा भव्य रूपले हुन गयो । धरान पब्लिक हाई स्कुलको प्रांगणमा दसौं हजार मान्छेको उपस्थितिमा फेरि अर्कोपटक किरामुमोले त्यो गीतलाई आफ्नो राष्ट्रिय गीत घोषणा गर्‍यो । त्यो किरामुमोको पहिलो र आधिकारिक घोषणा थियो । त्यो गीत त्यति नै हजार मान्छेको अगाडि फेरि त्यहाँ एकपटक गुञ्जायमान भयो । यसरी बार एसोसिएसनको सानो हलबाट, थोरै किरातीहरूको साक्षबाट सुरु भएको त्यो गीत अब सबै उत्पीडित जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र र समुदायको हुन पुगेको थियो ।
त्यहाँ माओवादी नेताहरूसँगै स्टेजमा मलाई देखेर भोलिपल्ट धरानका पत्रकारहरूले सोधे, ‘तपाईं कहिलेदेखि माओवादी बन्नुभयो ?’ जवाफमा मैले भनें, ‘म माओवादी बनेको होइन, माओवादी मजस्तो बनेको हो ।’
‘कसरी ?’ उनीहरूले फेरि सोधे ।
भनेँ, ‘किनभने २०४८ सालदेखि मैले मेरा सृजनाहरूमा उठाएको एजेन्डा बल्ल माओवादीले आफ्नो बनाएको छ ।’ सञ्चारजगत्, विरोधी कित्ता वा संस्थापन विचार सबको नजरमा माओवादी बन्नु पनि एउटा ठूलै अपराध गर्नुजस्तो ठानिने त्यतिखेरको समयमा मलाई त्यस्तो प्रश्न गरिएको थियो । मलाई लाग्छ, म माओवादी बन्नु/नबन्नुभन्दा पनि मेरो उत्तरले त्यतिबेला जे भन्न खोजेको थियो त्यो सायद विशेष अर्थपुर्ण थियो ।
अब, यतिखेर त्यो खरामुमो छैन । त्यही रूपको माओवादी छैन । त्यहीअनुसारको किरामुमो पनि छैन । तर, कहीं न कहीं त्यो गीत अझै छ । र, त्यो गीत छिट्टै मर्नेवाला पनि छैन । किनभने त्यसले देखेको सपना अझै पूरा भएको छैन । सायद लेख्नुपर्ने त्यसको कथा अझै बाँकी छ ।
र, नलेखे पनि हुने यत्ति कथाचैँ अब लेखिसकिएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन ९, २०७७ १८:३४